Wasiiro iyo Xildhibaanno ka qeyb galay Nabadoon lagu caleemo saaray Muqdisho – Radio Muqdisho
Wasiir ka tirsan Xukuumadda Soomaaliya ayaa ka qeyb galay munaasabad lagu caleemosaarayay nabadoon ka mid ah Nabadoonada Soomaaliyeed, kaasi oo lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Nabadoon Xaaji Axmed Maxamed Calasow oo ka mid ah Nabadoonada Soomaaliyeed ayaa waxaa ka qeyb galay Wasiirka Warfaafinta, dhaqanka iyo Dalxiiska, Wasiiru-dowladaha arrimaha Gudaha, qaar kamid ah Ra’iisul wasaarayaashii soo maray dalka xilligii KMG ah, Xildhibaanno, Ururrada haweenka iyo marti sharaf kale, waxaana goobta lagu soo bandhigay suugaan ka turjumeysa qiimaha ay dhaqanka u leedahay bulshada.
Nabadoon Xaaji Axmed Maxamed Calasow oo ah Nabadoonka la caleemo saarayay ayaa Alle uga baryay in Ummadda Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan isu keeno oo ay noqdaan dad ka wada shaqeeya danta guud ee dalka.
Guddoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka Soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed Gabale ayaa Nabadoonka ku boorisay in uu guto xilka loo idmaday ee ah ka shaqeynta midnimada Ummadda Soomaaliyeed.
Mudane Ismaaciil Hurre Buubaa oo mar soo noqday Wasiirka Arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa isna dhankiisa xusay inuu soo dhaweynayo, isla markaana uu kula dar daarmay in bulshada ay ka dambeeyaan dadka u ah Madax dhaqameedka.
Madaxweynaha Maamulka Khaatumo Cali Khaliif Galeyr oo isna kulanka ka hadlay ayaa Nabadoonka u rajeeyay in uu Alle gacan ku siiyo duubka loo caleemo saaray.
Nuur Xasan Xuseen (Nuur-Cadde) iyo Cali Maxamed Geeddi oo horey Ra’iisul wasaarayaal ka soo noqday Soomaaliya, xilligii KMG ah ayaa Nabadoonka ugu baaqay in uu gacan ka geysto sidii dib loo soo nooleyn lahaa dhaqankii soo jireenka ahaa ee ay Soomaalidu lahayd.
“Waxaan rabnaa in maanta loo aqoonsado maalinta dhaqanka, isla markaana dhiiri geliyo, waxaan ka rajeyneynaa in uu ka shaqeyn doono dib u nooleynta dhaqanka”
Xildhibaan Cumar Maxamed Maxamuud ayaa xusay in uu aad ugu faraxsanyahay ka qeybgalka xafladda lagu caleemo saarayo nabadoon ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee dega Gobolka Shabeelaha Dhexe.
Wasiiru dowlaha Arrimaha gudaha iyo Federaalka Mudane Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa sheegay in Wasaaradda arrimaha gudaha ay waddo qorshe lagu kala saarayo Nabadoonada Saxda ah iyo kuwa aan saxda ahayn.
Wasiirka Warfaafinta, dhaqanka iyo Dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa odoyaasha dhaqanka ka dalbaday inay la shaqeeyaan dowladda, isla markaana ay gacan ka geystaan sidii bulshada looga wacyi gelin lahaa, dhibaatada ay kooxaha argagixisadu ku hayaan,
Maaxweynaha oo canbaareeye qaraxi shaqalaaha UN-ka lagula beegsaday Garowe.